DHAGEYSO:Ka dib natiijo la’aantii shirkii Dhuusamareeb maxaa la filan karaa? | Star FM
Home Wararka Soomaaliya DHAGEYSO:Ka dib natiijo la’aantii shirkii Dhuusamareeb maxaa la filan karaa?
DHAGEYSO:Ka dib natiijo la’aantii shirkii Dhuusamareeb maxaa la filan karaa?
Ka dib Markii uu natiijo la’aan kusoo dhamaaday shirkii Magaalada Dhuusamareeb ay ku yeesheen Madaxda dowlada Dhexe ee Soomaaliya iyo kuwa Maamul goboleedyada ayaa waxaa siyaabo kala duwan xaaladaha ay suuragalka tahay in dalku Galo maadaama muddo Xileedka dowlada dhexe Madaxdeeda uu gabogabo yahay.
Garyaqaan Daahir Maxamad Maxamuud oo ka mid ah Garyaqaanada Soomaaliyeed ayaa ka hadlay waxyaabaha ka dhalan kara xaaladda hadda uu dalka Soomaaliya marayo maadaama aan wali lagu heshiin hanaankii doorashada dalkaasi.
Previous articleIn ka badan 30 ka mid ah bulshada Rohingya oo loo xiray in ay galeen Malaysia
Next articleKhamenei oo Maraykanka ka dalbatay in uu Iiraan ka qaado xayiraadda